ဂီတဆို ဒီကကြောက်ပါပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဂီတဆို ဒီကကြောက်ပါပြီ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Apr 20, 2010 in Drama, Essays.. |4comments
ကိုပေါက် လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေး
ကျွန်တော်ကအလုပ် အားတဲ.အချိန်လေးဆိုရင် ကိုယ်.အိမ်မှာ သီချင်းဆိုပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေကို အသံနဲ.နှိ်ပ်စက်တတ်ပါတယ်။
သူများ အဖုို.တော. မသိဘူး ကိုယ်ဆိုတဲ.အသံကို တော. လန်းတယ်ထင်တာဘဲလေ။
တစ်ရက် အိမ်မှာ သီချင်းဆိုကောင်းနေတုန်း အိမ်တံခါးဝမှာ မိုးပြာရောင်ဝတ်စုံ ၀တ်ထားတဲ. လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ.တော.
*မူရင်းပိုင်ရှင် (အချုပ်တန်းဆရာဖေ )(သက္ကရာဇ်1125ခန်. ) (1)အောက်မေ.တိုင်းမျက်ရည်လည်
ဘေးနားက ဆေးပြင်းလိပ်နဲ.လူဝကြီးက ” ”
ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာ ဒီပြဿနာ ကတော်တော်ကြမ်း နေတယ်
အနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်း မှာ ကိုသဘောထားမတူကြတော့ဘူး
ကိုညီထွဋ် ကတော့ ပရိတ်သတ် မှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပြောထားတယ်
nyein chan ko koi says:
လုပ်တာတွေ မဟုတ်လို့ မဟုတ်တာတွေ လုပ်တာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးစ်……ကီပေါ်တဲ့ ကော်ပီကိုလည်း အားပေးတယ်…….ခူးကိုးတဲ့ ခိုးကူးခွေကိုလည်း နားထောင်တယ်…
အနုပညာကို ဘက်ပေါင်းစုံက နေ အားပေးတယ်….ဒါပေမဲ့နောင်ကြီးလို့တော့ ရုံးပေါ်ကတော့ အားမပေးဘူးစ်….ဟိဟိ။။။။
ဈေးသက်သာတာဘဲ အားပေးမှာပေါ့ သူတို့ လဲ ကော်ပီပဲဟာ
ထုတ်လုပ်သူ အဆိုတော် တေးရေး တီးဝိုင်းဆရာတွေက အခုလို တစ်ခါသုံး
စနစ်နဲ.ပုဒ်ပြတ်မယူဘဲ ရာခိုင်နှုန်းစံနစ်နဲ. ယူရင်တကယ်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်လို့ အခွေစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ဝယ်လို့ရရင်ပေ့ါ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ၀ယ်သူတွေက ဆက်ပြီး ကော်ပီခွေတွေပဲဝယ်နေရင်လည်း အဆိုတော် တေးရေး တီးဝိုင်းဆရာတွေ ဒုက္ခပေ့ါ။ ဒီမှာကလည်း သီချင်းခွေဆိုရင် ကော်ပီတွေက များမှများပဲ။ တချို့ဆိုရင် တစ်ခွေလုံး တိုက်ရိုက်ပဲ။